गुरुङ सरकारमा जाने कि मध्यावधि निर्बाचनमा ? जसपामा बहस, आजै प्रदेश कमिटी बैठक बस्दै - Samadhan News
गुरुङ सरकारमा जाने कि मध्यावधि निर्बाचनमा ? जसपामा बहस, आजै प्रदेश कमिटी बैठक बस्दै
समाधान संवाददाता २०७८ जेठ २४ गते १२:०४
विपक्षी गठबन्धनकाे बहुमत पुर्याउने अनेक प्रयास असफल भैरहेकाे बेलामा गण्डकी प्रदेशमा अब २ वटा विकल्प माथि चर्चा सुरु भएकाे छ, विकल्प पृथ्विसुब्बा गुरुङकाे सरकारलाई समर्थन दिने वा विश्वासकाे मत नदिएर प्रदेशलाई मध्यावधि निर्बाचनमा लैजाने ।
सर्बाेच्च अदालतले जनमाेर्चा सांसद कृष्ण थापालाई पुनरवहाली नगरेकेा भए विपक्षी गठबन्धन बहुमत पुराउने अवस्थामा थियाे । अब त्याे सम्भावना पनि टरेकाे छ । यस्ताे अवस्थामा सिमित विकल्पका कारण विपक्षी दलहरु पनि अलमलमा परेका छन् ।
सबै भन्दा बढी अलमल र विभाजित अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी छ । याे पार्टीकाे गण्डकी प्रदेश कमिटी पनि विभाजित छ । केन्द्रमा स्थायित्व चाहियाे, काेराेना महामारीका कारण निर्बाचनमा जाने अवस्था छैन भन्दै विघटित प्रतिनिधि सभा पुरवहालीका लागि मुद्दा दिएकाे जसपा गण्डकी प्रदेशमा के गर्छ भन्ने अन्याैल छ ।
विभाजित अवस्थामा रहेकेा जसपा गण्डकीकाे बैठक आजै बस्दैछ । श्राेतका अनुसार दिउसाे ३ बजेबाट बस्न थालेकाे जुम बैठकमा गण्डकी सरकारकै बारेमा छलफल र निर्णय गर्ने एजेण्डा छ । बैठकमा गण्डकी प्रदेश कमिटीका अतिरिक्त याे प्रदेशबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता सहभागी हुँदैछन् ।
गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज गणेशमान गुरुङ विपक्षी गठबन्धनकाे सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले प्रदेशलाई मध्यावधि चुनाबमा धकेल्ने गल्ती जसपाले गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । उनले यसाे भन्नु भनेकाे अहिले कै सरकारलाई निरन्तरता दिनु हाे ।
काेराेना महामारीकाबीचमा प्रदेशलाई चुनावमा जानबाट जाेगाएकाे श्रेय जसपाले लिँदा राम्राे हुन्छ भन्ने तर्क गुरुङकाे छ ।
प्रदेश कमिटी कै उपाध्यक्ष किरण थापा भने कुनै पनि हालतमा याे सरकार जाेगाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । उनले मुख्यमन्त्री पृथ्विसुब्बा गुरुङ पनि ओलीकै छाँया हुन् भन्दै समर्थन गर्ने वा सरकारमा जाने विकल्प राेज्नै नसकिने बताउछन् ।
यही सन्दर्भमा आज हुन लागेकाे बैठकलाई महत्वपूर्ण मानिएकाे छ । बैठकमा केन्द्रीय नेता पनि सहभागी हुने र उनीहरुकाे धारणाका आधारमा सरकारलाई समर्थन मात्र गर्ने, सरकारमा सहभागी नै हुने वा मध्यावधि निर्बाचनमा जाने भन्ने निर्णय लिइने एक नेताले समाधानलाई जानकारी दिए ।